Kutsiva kwaJehovha pamarudzi (1-8)
Edhomu ichava dongo (9-17)
34 Swederai pedyo munzwe, imi marudzi,Uye teererai, imi marudzi. Nyika nezvese zviri mairi ngazviteerere,Nyika nezvibereko zvayo zvese. 2 Nekuti Jehovha akagumbukira marudzi ese,+Uye hasha dzake dziri pauto rawo rese.+ Achaaparadza;Achaita kuti aurayiwe.+ 3 Vanhu vawo vakaurayiwa vachakandwa kunze,Uye kunhuhwa kwezvitunha zvavo kuchakwira;+Makomo achanyunguduka neropa ravo.+ 4 Uto rese rekudenga richaora,Uye denga richamonwa segwaro.* Uto rawo rese richasvava rodonha,Seshizha rasvava rinodonha kubva pamuzambiringaUye seonde raputana rinodonha kubva pamuonde. 5 “Nekuti bakatwa rangu richaguta kudenga.+ Richaburuka kuzotonga Edhomu,+Ivo vanhu vandakati ndichavaparadza. 6 Jehovha ane bakatwa uye richazara neropa. Richazara nemafuta,+Neropa remakondohwe madiki nembudzi,Nemafuta eitsvo dzemakondohwe. Nekuti Jehovha ane chibayiro kuBhozra,Mhuka dzakawanda dzichaurayiwa munyika yeEdhomu.+ 7 Nzombe dzemusango dzichadzikawo pamwe chete nadzo,Nzombe diki pamwe chete nedzine simba. Nyika yavo ichaguta neropa,Uye guruva ravo richazara nemafuta.” 8 Nekuti Jehovha ane zuva rekutsiva,+Gore rekuranga, achiitira Ziyoni.+ 9 Hova dzayo* dzichachinjwa kuva namo,Uye guruva rayo kuva sarufa,Uye ivhu rayo richava senamo iri kubvira. 10 Haizodzimwi usiku kana masikati;Utsi hwayo hucharamba huchikwira nekusingaperi. Ichagara yakaparara kwezvizvarwa nezvizvarwa;Hapana munhu achapfuura nemairi nariini nariini.+ 11 Dhadha remuromo murefu nenungu zvichagara imomo,Uye mazizi ane nzeve refu nemakunguo zvichagara imomo. Achaiyera netambo kuti aratidze kuti ichasara isina chinhuAchaiyera netambo inoshandiswa kururamisa mudhuri pakuvaka* kuti aratidze kuti ichava dongo. 12 Hapana vakuru vakuru vayo vachashevedzwa kuti vave paumambo,Uye machinda ayo ese achasara asisiri chinhu. 13 Minzwa ichamera mushongwe dzayo dzakasimba,Tumakwenzi tunobaya neutumbambeva* zvichamera munhare* dzayo. Ichava nzvimbo inogarwa nehunguhwe,*+Nzvimbo inogara mhou. 14 Mhuka dzemugwenga dzichasangana nemhuka dzinoungudza,Uye mbudzi yemusango ichashevedza imwe yayo.* Chokwadi dahwa richagara imomo rowana nzvimbo yekuzororera. 15 Nyoka inoita semuseve ichagadzira musha wayo imomo, yokandira mazai,Uye ichachochonya, younganidza vana vayo pasi pemumvuri wayo. Shiri dzinonzi ngavi dzichaungana imomo, imwe neimwe iine sheche yayo. 16 Tsvagai mubhuku raJehovha muriverenge zvinonzwika: Hapana kana chimwe chete chazvo chichashayikwa;Hapana chichange chisina hadzi yacho,Nekuti muromo waJehovha ndiwo wapa murayiro wacho,Uye mweya wake ndiwo wazviunganidza. 17 Iye ndiye azvikandira mujenya,Uye ruoko rwake rwazviyerera nzvimbo yazvo yazvinofanira kugara.* Icharamba iri yazvo;Zvichagara mairi kwezvizvarwa nezvizvarwa.
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva Bhozra, guta guru reEdhomu.
^ ChiHeb., “nematombo.”
^ Izvi zvakaita semasora uye zvine minzwa.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Dhimoni rakaita sembudzi richashevedza rimwe raro.”
^ ChiHeb., “rwaigova kwazviri ruchishandisa tambo yekuyeresa.”